8897@BKK Iloft Ethokomele/Eduzane ne-Asoke/Indiza/Indiza/imizuzu emi-5 ukuya ku-BTS - I-Airbnb
8897@BKK Iloft Ethokomele/Eduzane ne-Asoke/Indiza/Indiza/imizuzu emi-5 ukuya ku-BTS
Bangkok, Krung Thep Maha Nakhon, i-Thailand
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Yao Yao
U-Yao Yao Ungumbungazi ovelele
Ikhaya lethu lisendaweni yama-22. Yindawo yokungcebeleka esezingeni eliphezulu. Ungakwazi ukujabulela ukubuka ebusuku kweBangkok phambi kwesitezi!
📍Ikhaya LETHU Limaphakathi ne-Bangkok, amamitha angu-500 ukusuka esiteshini i-Rama9 MRT, amaminithi angu-6 ukuhamba ngezinyawo. Kuyisiteshi esisodwa kuphela sikametro osuka eRatchada Train Night Market. Kukude nezitobhi ezi-2 kuphela ukusuka e-Asok Station. (umugqa we-BTS) Kungamamitha angu-500 ukusuka e-Makkasan Airport Rail Link Station. Lesi sikhala singakunikeza lula kakhulu lokuhamba noma yikuphi e-Bangkok.
I-loft engamamitha-skwele angama-38 enophahla lwamamitha angu-3.6. Ifakwe ifenisha enethezekile, isiphephetha-moya kanye nezinsiza ezisebenzayo. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukujabulela zonke izinsiza ezivamile enikeziwe efulethini.
Okufana nalokhu: indawo yokubhukuda enkulu yangaphandle, indawo yokuzivocavoca, isiteshi sezingane kanye nendawo yokusebenza yomphakathi.
Igumbi lifakwe: I-air conditioning, isiqandisi, i-smart TV, iketela
Igumbi lokugezela elivulekile nelihlanzekile elisebenza ngokugcwele
Ikhishi: i-oven microwave kanye nemishini yokupheka elula, ungakwazi ukushisa ukudla nokunye ukudla kalula
Izinsiza: ifakwe umshini wokuwasha
Okunye: Amathawula ne-WIFI yamahhala yesivinini esikhulu enikeziwe
Ngethemba ukuthi ungaba nesikhathi sokuphumula!
ubusuku obungu-7 e- Bangkok
Kungamamitha angama-500 ukusuka esiteshini esingaphansi kweRama9 futhi kuthatha imizuzu eyi-6 ukuhamba. Kuyindawo eyodwa kuphela ukusuka e-Ratchada Train Night Market. Kukude nezitobhi ezi-2 kuphela ukusuka e-Asok Station, lapho i-Terminal 21 itholakala khona. Indawo enhle futhi elula kakhulu ukuhamba. I-Makkasan Airport Line ingamamitha angu-500 kuphela, okwenza kube lula ukuya nokubuya esikhumulweni sezindiza. Lesi sikhala singakunikeza lula kakhulu lokuhamba noma yikuphi e-Bangkok. Izungezwe ukudla kwasemgwaqweni kanye nezitolo ezinkulu ezifana neCentral Rama 9, Fortune Town. Ratchada train night market.
Ibungazwe ngu-Yao Yao
hiya,I'm interior designer who have been traveled to more than 10 countries. I think I understand you guys who love traveling as well.If there is anything I can help to make your journey more memorable,I would definitely do!!
UYao Yao Ungumbungazi ovelele